Deni oo si adag uga hadlay weerarkii lagu dilay Gudoomiyihii G... | Universal Somali TV
Deni oo si adag uga hadlay weerarkii lagu dilay Gudoomiyihii Gobolka Mudug
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay ka hadlay amniga guud ee Puntland, Qorsheyaasha dhinaca amniga ee socda, wuxuuna ka tacsiyeeyay geerida alle ha u naxariistee Gudoomiyihii Gobolka Mudug, Axmed Muuse Nuur oo lagu dilay ismiidaamin ka dhacday Magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha Puntland ayaa ugu horeyn ka tacsiyeeyay geerida Gudoomiyihii Gobolka Mudug ee Puntland, isagoo sheegay in falkaasi argagixiso uusan niyadjab iyo baaqsasho ku keenayn shaqada socota, howlgalada amni ee argagixisada lagu soo afjarayana ay sii socon doonaan inta laga sifeynayo dalka. Madaxweynaha ayaa sheegay in cadaaladda la marinayo dadkii ka dambeeyay dilkii Gudoomiyihii Gobolka Nugaal iyo sidoo kale dadka lagu helo baaritaanada socda ee dilka Gudoomiyaha Gobolka Mudug.
Wuxuu Madaxweynuhu bulshada la wadaagay in dhammaan xubnaha argagixisada ee ka dambeeyay weerarada noocan oo kale ah in cadaaladda la horgeyn doono, lana xukumi doono, ciqaabtoodana lagu fulin doono fagaare bulshada horteeda ah.
Madaxweyne Deni wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in Puntland iyo ciidamadeeda aysan illaa iyo hadda jirin cid gacan ka siisay la dagaalanka argagixisada, iyadoo ay wadamada iyo hay'adaha taageera Soomaaliya ay sheegaan in ay Soomaaliya ka taageeraan amniga. Wuxuuse sheegay Madaxweynuhu in aysan jirin wax taageero ciidan ah oo ay Puntland hesho.
Deni ayaa ugu dambeen waxa uu shacabka Puntland ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan illaalinta amniga iyo horumarka Puntland, wuxuu si gaar ah Madaxweynuhu fariin ugu diray dhalinyarada reer Puntland inay dowladda kala shaqeeyan arrimaha amniga.
Kan-xigaPuntland oo qafiifisay bandowgii ay d...
Kan-horeWararkii ugu dambeeyay Gudoomiyihii G...
Jubbaland oo ku dhawaaqday xilliga la qaadayo Imtixaanka Shahaadiga
Somaliland oo markale maanta shaacisay 35 xaaladood oo cusub
Guddiyada Joogtada ee Labada Aqal oo shir uga socdo Muqdisho (SAWIRRO)
53,320,204 unique visits